ခေတ်မီလိုက်ရင် ကောင်းမလား! – ပြင်းရှတဲ့ ၀ိုင်တစ်ခွက်ပေါ့
This entry was posted in ဟိုဟိုဒီဒီ, shared information and tagged co-operative, Development, individualism, strength. Bookmark the permalink.
← ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှ အသီးအပွင့်များ
5 thoughts on “ခေတ်မီလိုက်ရင် ကောင်းမလား!”
ThihaTHit | June 24, 2009 at 10:45 pm
ခေတ်များ တကယ်မီ သွားပလားလို့ လာဖတ်တာ 🙂
ကုမ်ရာသီသူ | June 25, 2009 at 2:52 pm
ကိုသဟသ>> ကျေးဇူးပါ။ ရုံးကို ရုန်းရင်းကန်ရင်းပဲ ရောက်သွားပါပြီ။ 😀
kom | July 6, 2009 at 12:45 am
ဟို (ab) about ဆိုတာကြီးကိုပြင်လိုက်ပါပြီ။စိ့ပုံးကအရက်သောက်နေတဲ့ပုံကိုပြောတာပါ။
ကုမ်ရာသီသူ | July 12, 2009 at 6:12 pm
နေကောင်းသွားပါပြီအမ။ အဟီး။ စီပုံးမှာ သောက်ပြီး ကောင်းသွားပြီ။ (နောက်တာ။ အတည်) 😛
ှရှင်သန်ခြင်း | July 14, 2009 at 7:40 pm
ဂျက်ဆင်ကို ဂုဏ်ပြုဖို့ ကြိုးစားကြည့်တာပါ။ လုပ်စားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ငါ့ကို သူ့ပရိသတ်လို့ ပြောရင် ကမ္ဘာပေါ်က သူ့ ပရိသတ် သန်း ၁ဝဝဝ ထဲက တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်ဟာ။ ငါ့ထက် ပိုပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဂုဏ်ပြုနိုင်ခဲ့တဲ့ http://moehlaingnya.blogspot.com/ မိုးလှိုင်ညမှာပဲ သွားခံစားကြည့်လိုက်ဦးဟ။ နင်လည်း ကြိုက်မှာပါ။ ခုလိုခဏခ လာပြီး စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်အောင် လုပ်လုပ်သွားလို့ ကျေးဇူးပါပဲ။ အဟီး။ တကယ်တင်တာ။ သြော်…. ခေတ်တော့ မမှီလိုက်နဲ့ဦးဟေ့။ နင်က ပြန်ကောင်းလာနိုင်ပေမယ့် ဟိုထနောင်းကို ကူးသွားရင် ပြန်ပါလာတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ အဟီး